Accueil > Gazetin'ny nosy > AKOM-BAOVAO SAMIHAFA
Sehatra tsy miankina
Nampihatra ny velirano miisa 13
Tsy mitsahatra mandrak’androany ny famatsian-drakitra avy any ivelany azon’i Madagasikara , eo amin’ny fiaraha-miasa ho enti-manatanteraka ny velirano miisa 13. Tsy misy volam-panjakana ny fanantaterahana ireo karazana velirano nisandrahaka isam-paritra. Lokalokan’ny filohampirenena ny namitana izany, fony izy nilatsaka filohampirenena tamin’ny 2018. Ny mpamatsy rakitra avy any ivelany no anisan’ny nampiaina ny fikambanana tsy miankina , sady nitondra anjara biriky, izay nisitrahan’ny vahoaka isam-paritra. Ohatra amin’izany ny Ong Taratra, nanao tetikasa vovo nahazahoana rano fisotro madio sy lava-piringa, izay antoky ny fahadiovana. Teo koa ny fikambanana tsy miankina samihafa tamin’ny famokarana herinaratra tany ambanivohitra. Ny fikambana malagasy, amin’ny famokarana azo avy amin’ny fiompiana landy, fiompiana tantely nanome sehatra asa ho an’ny tsy manana asa fivelomana.
Mitohy ny hataka trosa manandevo
Efa lany henatra tanteraka ny mpitondra fanjakana, izay soloin’ny minisitry ny Toe-karena sy ny fitantanam-bola Rabarinirinarison Rindra Hasimbelo tena nihazo ny Renivohitr’i Ghana ny alatsinany lasa teo. Ankoatry ny fandraisana anjara tamin’ny fivoriana tany dia nanao sonia fifanaraham-pindramam-bola izy ka nandeha ambaratonga izany.Trosa manandevo hatrany amin’ny taranaka faramandimby izay endri-panjanahana mivantana no natao sonia. Na famatsiam-bola tsy averina na fampindramam-bola averina dia azo adika ho rakitra ny sora- bola, izay trosa manandevo ho an’i Madagasikara. Miharihary toy ny vay an-kandrina ny mbola fiankinan-dohan’ny mpitondra fanjakana amin’ny mpampanjana-bola iraisam-pirenena. Ny faritra ao « Bas Mangoky » dia nahazo fampindraman-drakitra mitentina 2.497.000 dolara . Famantsiam-bola tsy averina kosa ny anjaran’ ny tetikasa ADRIFI momba fanarenana ny takaitra navelan’ny loza voajanahary, izay rakitra koa, misanda 1.900. 000 dolara. Ny farany dia famatsian-drakitra 1.340.000 dolara hanamafisana ny fitantanam-panjakana amin’ny alalan’ny rindra-kajy mirindra (PREGODI). Ny tetikasa PICAS kosa dia miandry fankatoavana ny rakitra 12.5 tapitrisa UC ho fanatsarana ny farim-piainan’ny mponina ao amin’ny faritra Anosy Androy.
Tsy adino ny fanonerana ireo tompon-tany
Araka ny didim-panjakana nivoaka tamin’ny 30 jona 2021 dia handoa onitra amin’ireo ampahan-tany miisa 342 indray ny fanjakana, ka eny Alasora no toerana fandoavam-bola voatokana handoavana izany, tamin’ny fotodrafitrasa lalana Raokadin’Iarivo. Maro ny tany manan-tompo tafiditra tamin’io tetik’asa nanamboarana ny lalana Raokadin’Iarivo io, ka andiany fahatelo izao fandoavana onitra izao, ka hivoaka an-gazety ny lisitra farany ary hirosoana ny fandoavam-bola. Vonona hanampy amin’ny fikarakarana ny taratasy ara-panjakana ny fikambanana araka ny nambaran-dRasoarinirina Holy, tompon’andraikitry ny Agetipa. Miantso ireo olona tsy mbola nahafeno ny antontan-taratasy momba izay koa ny lehiben’ny Sampan-draharaha misahana ny famehezana ny tany, dia Rakotoarisoa Félix. Hanomboka amin’ny 31 may ka hatramin’ny 27 jona ny fanentanana ny tompontany rehetra tamin’io. Ny fanentanana teny amin’ny fokontany sy ny kaominina dia efa nanomboka omaly 24 may.